म’दि’रामा कठोर बन्यो ओली सरकार, कुनमा कतिले बढ्यो कर ? – Sapana Sanjal
सरकारले म’दि’रामा अन्तशुल्क बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले म’दि’रामा अन्तशुल्क बढाएका हुन् । उनले जौबाट बनेको म’दि’रामा अन्तशुल्क प्रतिलिटर १९८ रुपैयाँ पुर्याएका छन् । चालु आवमा यो प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँ थियो ।
Nextसरकारी कर्मचारीको तलब, अब कसको कति पुग्यो? (सुची सहित)